Xeer ciise - Wikipedia
Waxa Xaqiiq ah in Xeer Kasta oo Ummadi leedahay lagu dhisay Ujeedo ka Turjumaysa Falsafada uu ku Dhisan yahay Xeerkaasi . hadaba Xeerka ciisaha oo lagu Tilmaamo ka ugu Raadraac dheer marka la eego Geeskan Afrika ayaa marka la tix raaco noqonaya mid koobsanaya Dhammaan Qaybaha Nolosha Dadka iyo duunyadaba. Waa mid kala Hagaya Ismaandhaafka Ciisaha isla markaana Qeexaya xidhiidhka ciisaha iyo Bulshooyinka kale.
Xeerkan oo ay ka soo Shaqeeyeen Odoyo Dhaqammeedyo Xeerbeegti ah Khibarad sarena u lahaa Xalinta iyo Xadaynta Mashkaladaha Bulshada ayaa u Huray Nafahoodii iyo Maalkoodiiba si ay uga Midho dhaliyaan Habaynta iyo Iskudubarridka Xeerkan. Waana ta Maanta Keentay in ay Baal Dahaba lagu Qoro Magacyadooda, Bulshaduna u og tahay Wax qabadkooda.
Qaab dhismeedka Xeerkan Ciisahe een Faahfaahintiisa hoos ku xusi Doono ayaa ah mid ku Dhisan rukuno Asaas u ah Xeerka.
Waxayna Yihiin sidatan :
1. Lix (6) Kabood.
2. Boqol iyo lixdan Dhagalay (160)
3. Saddex boqol iyo lix iyo Soddon (336) Sarood.
4. Afar boqol iyo Afar iyo Afartan ( 444) Indhal.
A) Lixda Kabood.
Lixda kabood oo ah qaybaha uu xeerku ka hadlay waxay kala yihiin.
• Dhiig • Dhaqan • Dhaqaqaal • Dheer • Dhul • Dhibleh
Kabta koowaad ee dhiiga waxay u kala baxdaa
Dhimasho ( dhimasho waxa ay ka dhigantahay labo reer ciisaha oo islaayey) Dhagar ( qof qof dilay) Jab iyo Jareexo ( Waa wixii dhaawac ah ee la isgaadhsiiyo) Boqolkii Cune. 2) Dhaqan.
Doorashada Ugaaska. Gandaha 44 nin Gudi oo ah 12 nin 3) Dhaqaqaal
oo ah xeerka qaabilsan dhaqaalaha
Dhaqaaluhu wuxuu u kala baxaa Mood iyo Nool. Ciisuhu xeer uma dhigin moodka. Noolku wuxuu ka koobanyahay ( Sagaal halaad iyo Dameer iyo Ey) Sagaalka halaad waxay u kala baxaan ( Saddex waa dhaban, Saddex wa Dhaxal, Saddexna waa Dhibaad)
Dheertu waxay ku saabsantahay xuquuqda iyo dhibta loo gaysto haweenka.
Xuquuqda ay Hawenku wax ku helaan
1. Dhaban wax ku hesha 2. Dhaxal wax ku hesha.
Dhibta loo gaysto. Haweenku waxy u kala baxaan sida tan
1. Bila Cad 2. Baara Cad ( gabadha aad u yar) 3. Gambo Cad 4. Banaanay 5. Gabadh wiilsidatay. 6. Duqdii Saddex goor ka ca. 7. Gorgor 8. Gidir 9. Golo ka bood 10. Sodoh 11. Islaan xigaaleed 12. Gabadh ninkii ay u doonanayd xumeeyey. 13. Xaynkeed wadha ( gabadhani xeer ma leh)
Dhul ku wuxuu u kala baxaa Bad iyo Beri. Hadaba Ciisuhu Bada xeer uma dhigin. Dhulku wxuu u kala baxaa ( Beer; Daaq iyo Ceel) Ciisuhu Xeerkii Siti lagu dejiyey wax Beer ah kamuu hadlin inkasta oo dad Ciisaha ka mid ahi mudo 70 sano laga joogo ay xeerka Beeraha samayteen. Ciise wuxuu ka hadlay Daaqa iyo Ceelka .
Kabta lixaad oo ah dhibleh oo macnaheedu yahay qofkii dhibaatada loo geystay ciisuhu waxay u kala saareen. Afar dhagaleey.
Reerka ciise ( Waxa la yidhi Kuna ha ahaadaane waa nin Waxa kale oo la yidhi Ciise waa wada ciise nina nin caaro ma dheera) Ahli ( waxaa loo jeedaa Soomaalida kale) Hiirimaad ( Wixii Islaam ah ee aan ahayn Soomaali) Dhibleh ( waa qofka Gaalka ah) Lixdaa kabood ayaa aas aas u ah Xeerka ciisaha Waxaana lagu sii faah faahiyey dhagalayda ama Sarta iyo Indhasha la dhigay.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xeer_ciise&oldid=144372"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 14:11, 28 May 2015.